Caawinta fiidiyowga ee AutoCAD, bilaash ah maalmaha 7 - Geofumadas
Luulyo, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, Microstation-Bentley
Tani waa fursad aan cidna ka maqnaan. Si ku-meelgaar ah, ilaa September ugu dambeyn 2011 CADLEarning waxay soo bandhigtay kuuboon kuugu soo galeysa kaas oo aad gali karto inta lagu jiro maalmaha 7 dhammaan ilaha la heli karo.
CADLearning waa mid ka mid ah shirkadaha ugu wanaagsan ee ay ansixisay AutoDesk si loo horumariyo buugaagta iyo koorsooyinka internetka oo aad ka baran karto raaxada macaamiisha.
Nasiib daro, haddii aan tixgelinno in qaansaradu ay ka mid yihiin wax ka badan 10,000 video tutorials meel u dhow 60 ee barnaamijyada AutoDesk, oo ay ku jiraan tijaabooyinka koorsooyinka shahaadada.
Adoo galaya isticmaalka koodhka furan, waxaad arki kartaa oo soo bixi kartaa dhamaanba qaybaha mawduuca, imtixaannada qiimaynta, xogta loo qoondeeyay layliyada iyo dabcan aragto barashada fiidiyowga oo ay ku jiraan codka. Ku dhowaad kooras kasta waxaa lagu daraa noocyo cusub, inkastoo qaar ka mid ah ay ku jiraan noocyo waaweyn iyo Mac, sida hoos ku tusay:
Macalimiinta AutoCAD 2012
AutoCAD 2012 Muhiimadda
AutoCAD 2011 loogu talagalay Macmooyinka Mac
Qalabka Macalinka ee AutoCAD 2011
AutoCAD 2011 Muhiimadda
Qalabka Macalinka ee AutoCAD 2010
Qalabka Macalinka ee AutoCAD 2009
Cusbooneysiin AutoCAD 2009
Cusbooneysiin AutoCAD 2008
Cusbooneysiin AutoCAD 2007
Qalabka Macalinka ee AutoCAD 2006
AutoCAD LT 2011 Taxanaha Tababarka
AutoCAD LT 2010 Taxanaha Tababarka
AutoCAD LT 2009 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Architecture 2010 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Architecture 2009 Taxanaha Tababarka
ADT Architecture 2007 - 2008 Taxanaha Tababarka
AutoCAD 3D 2011D XNUMX Taxanaha Tababarka
AutoCAD 3D 2010D XNUMX Taxanaha Tababarka
AutoCAD 3D 2009D XNUMX Taxanaha Tababarka
AutoCAD 3D 2008D XNUMX Taxanaha Tababarka
AutoCAD Electrical 2010 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Electrical 2008 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Map 3D 2008 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Map 3D 2010 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Map 3D 2011 Waxbarashada
AutoCAD Map 3D 2012 Waxbarashada
AutoCAD Mechanical 2010 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Mechanical 2008 Taxanaha Tababarka
AutoCAD MEP 2011 Taxanaha Tababarka
AutoCAD MEP 2010 Taxanaha Tababarka
AutoCAD P & ID 2011 Taxanaha Tababarka
AutoCAD Raster Design 2010 Taxane Tababarka
Autodesk 3ds Macalimiinta Max 2012
Autodesk 3ds Macalimiinta Max 2011
Autodesk 3ds Macalimiinta Max 2010
Qalabka Falanqaynta Nalalka ee 3ds Max Design 2010
Autodesk 3ds Macalimiinta Max 9
Qorshaha Shahaadada Autodesk
Sirta ah in la gudbo shahaadada Autodesk
Diyaargarowga Imtixaanka Xirfadleedka ee AutoCAD 2011
Diyaarinta Imtixaanka Macaamiisha ee AutoCAD 2011
AutoCAD Civil 3D 2011 Diyaarinta Imtixaanka Aasaasiga ah ee Shahaadada
AutoCAD Civil 3D 2011 Diyaarinta Imtixaanka Qalinjabinta Shahaadada
Autodesk 3ds Diyaargarowga Imtixaanka Xirfad Leh ee 2011 Max
Autodesk 3ds Diyaargarowga Imtixaanka Xirfadleedka Shahaadada Aqooneed ee 2011 Max
Imtixaanka Autodesk Inventor 2011 Hubinta Imtixaanka Aasaasiga ah
Qorshaha Imtixaanka Xirfadlayaasha Shahaadada Shahaadada Shahaadada Shahaadada ee Autodesk Inventor
Qorshaha Dib-u-dhiska ee Autodesk Dib-u-dhiska 2011 Hubinta Imtixaanka Xirfadlaha
Qorshaha Autodesk Revit Architecture 2011 Diyaargarowga imtixaanka Xirfadleedka
Falanqeynta Qiimeeynta Autodesk
Falanqaynta Qiimeeynta 2010 / 2011 Taxanaha Tababarka
Mashiinka Mashiinka ah ee looyaqaan
Inventor 2011 Taxane Tababarka
Inventor 2010 Taxane Tababarka
Inventor 2009 Taxane Tababarka
Inventor 2008 Taxane Tababarka
Autodesk Maya 2011 Taxanaha Tababarka
Navisworks Maamul Xirmooyinka Tababarka 2010
Nidaamka Navisworks 2011
Dib u soo celinta dhismaha 2011 Taxanaha Tababarka
Dib-u-celinta Dhismaha 2008 Taxanaha Taxanaha Sare
Dib-u-celinta Dhismaha 2008 Tusmada Tababarka Tababarka
Dib-u-celinta Dhismaha 2009 Taxanaha Taxanaha Sare
Dib-u-celinta Dhismaha 2009 Tusmada Tababarka Tababarka
Dib u soo celinta dhismaha 2010 Taxanaha Tababarka
Revit MEP 2011 Taxanaha Tababarka
Revit MEP 2010 Taxanaha Tababarka
Revit MEP 2009 Taxanaha Tababarka
Qaabdhismeedka Autodesk Qalabka 2012
Qaabdhismeedka Autodesk Qalabka 2011
Qaabdhismeedka Autodesk Qalabka 2010
Qaabdhismeedka Autodesk Qalabka 2009 Essentials
Qaabdhismeedka Autodesk Qalabka 2009 Advanced
Autodesk Land Desktop 2006 Qodobbada, Goobaha, Qodobbada iyo Khariidada Intro.
Autodesk Land Desktop 2006 Shaqada Qalabka, Xayeysiinta iyo Xuduudaha
Autodesk Land Desktop 2006 Iskuduwaha, Gaariga iyo Lakabada
Qorsheynta Shahaadada Jinsiyada ee Autodesk
Autodesk Mashruuca Dhismaha Dadweynaha
Gaadiidka Sayniska ee Autodesk
Sidaa darteed, waa inaad sii wadaa xidhiidhkan, ka dibna gali koodhka helitaanka digniinta ee ONEWEEK, waxaad heli doontaa email soo celin, kadibna waxaad heli kartaa dhammaan khayraadkaas.
Isudheeli in ka mid ah kooxihii ka badan 80 ka mid ah laba ka mid ah line Bentley ah, kuwaas oo XM Microstation iyo Microstation V8i, kaliya dambaysta ah ayaa casharo 97 leh file a Tifaftirayaasha ku jirto faylasha waano, images raster, Layouts muunad la socota feylasha iyo faylasha kml.
Dabcan, taasi maahan heshiis weyn haddii aan tixgelinno koorsooyinka sida Revit Architecture waxay ku yaalaan duruusta 250 ee kooras kasta; si ay u helaan fikrad ah inta jeer ee aan soo celineyno.
Helitaanka koorsooyinka xidhiidhkan, ha ilaawin inaad isticmaasho Koodhka helitaanka ee ONEWEEK
Isku qor si aad u ogaato CAD.
Post Previous«Previous Hayso lover sida adiga
Post Next More Google+Next »
21 Jawaab in "Waxbarashada Video ee AutoCAD, bilaash ah maalmaha 7"
Salaan, Waxaan jeclaan lahaa inaan helo barnaamijka 'AutoCAD MEP 2011 Tutorial Series Tutorial, kuwan hadda ka dib looma soo dejisan karo si bilaash ah mise waa? Raadinta waxaan helay boggan ... laakiin taariikhda waxaan u maleynayaa inaysan ahayn ... Ma ogi in qof iga saari karo shakigaas iyo haddii weli la qaban karo waxaan qasbay inaan sameeyo si aan u soo dejiyo baraha ... Mahadsanid
Carmen Selvi isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan haysto ama aan galo Qalabka Dib-u-dhiska ee Autodesk Tababarrada 2012 iyo ■ Autodesk Civil 3D
qaylin isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan barto autocad, 20 sano ee noloshayda Waxaan ku dadaalayaa in aan naqshadeeyo guddi sawir, maanta waxaan ahay shaqo la'aan waxaana rajeynayaa inaan barto sidii aan u horumarin lahaa waxa aan ogahay, waana jeclahay waxaan rajeynayaa inaad i caawiso.
Koorsada Free AutoCAD 2012 waa halkaan:
Ku kalsoonow qof walba, wax walba oo ay igu dheheen waan necbahay laakiin nasiib daro ma helayo macalimiintii caanka ahayd ee Autocad 2012 ee Isbaanish ah, bilaash ah ... sideen u sameeyaa?
Miyeey jirtaa dariiqa lagu helo imtixaanada?
Waxaa macquul ah in kobcintaasi ay ahayd mid ku meelgaar ah oo aaney mar dambe shaqayn.
Hello, waxaan isku diyaarinayaa imtixaanada:
oo isagu iima ogolaan doono inaan isdiiwaangeliyo lambarka koodhka. Miyuu qofku ku filan yahay inuu ii soo diro dukumiintiisa email ahaan?
Waad ku mahadsantahay horay iyo salaan ka timid Spain
emailkaygu waa: carlosfagoaga@gmail.com
Hol, waxaan dhigayaa dhammaan xogta, waxaan ku siiyaa inaan sii wado waxna ma sameeyo. Qof ayaa iigu soo diri karaa emailkaan?
Waxaan rabaa inaan arko tijaabooyinka la xalliyo.
Salaan ka yimid Spain iyo dad badan oo aad u mahad naqay kan i soo diri kara
Wixii aad u baahan tahay:
Waxaad ka soo dejisan kartaa AutoCAD qaybta ardayga, waxay ku dhowdahay inaad haysato AutoCAD lacag la'aan.
Si aad u baratid, waxaad isticmaali kartaa koorsada ka muuqda fiidiyowyadan:
sergio david isagu wuxuu leeyahay:
hello wax fikrad ah kama qabo in la shaqeeyo autocad laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan barto. Anigu waxaan ahay mashiinka gaaska oo waxaan u baahanahay inaan barto inaanan bixin mushahar aan naftayda qaban karo, markaa waxaan weydiisan karaa haddii aad i hagaajin kartid sida loo barto iyo sida loo soo dejiyo autocad mahadsanidana waxaan rajeynayaa in waxoogaa caawimo ah oo ka yar jimka
Run, in kasta oo ay taasi kuxirantahay nooca qaabka fiidiyowyada ama sida loogu adeego, inbadan ayaa la dagaallami lahaa haddii durdurinta la adeegsaday iyadoo la adeegsanayo html5 iyo css.
userx isagu wuxuu leeyahay:
qalad, haddii aad isticmaasho barnaamij cajalad fiidiyow ah ... Waxaad arki doontaa in faylasha ay ku jiraan PC-gaaga ka dib markaad eegto, dabcan hawsha ayaa dheer, laakiin waad soo dejisan kartaa
Lama soo dejin karo, waxaa kaliya oo loo arki karaa internetka.
xukunka isagu wuxuu leeyahay:
sida cajaladaha fiidiyowyadan loo soo dejiyey waxaan ahay anshax sidan ah
Waxay fiicnaan lahayd haddii aan wadaagi karno macluumaadka koorsooyinka
Waxaan hore u haystay 2012 dhismo, laakiin waxaan u baahanahay dad badan oo kale, haddii aad xiiseyneyso
Thanks waxaan u maleynayay in ay ahayd wax dhib badan laakiin waxaan horay u oggolaaday inaan si fiican ugu mahadcelino aad u aragto si aad u aragto sida wanaagsan ee waxbarashadan.
Halkaa waxaad ku gashaa kuuban, oo leh xarafyo waaweyn ONEWEEK
Maqaal fiican laakiin qaybta ugu dambeysa waxaan codsanayaa lambarka ku-darka, kaas oo ay tilmaameyso, waa inaan ku biiraa koorsada ugu yar ee bixisa lacagta? ama miyuu ku qoran yahay bogga bixinta qadar lacageed? Waa maxay cadadka ugu yar ee aan bixiyaa si aan u haysto lambarka xiga?
Caawi fadlan, mahadsanid.